चित्रकला «Olia» (गार्निअर): समीक्षा, सिद्धान्त
धेरै महिलाहरु उज्ज्वल, राम्रो-groomed र आकर्षक हेर्न आफ्नो कपाल रङ लगाइएको। एकै समयमा तिनीहरूले निरन्तर नयाँ रंग को लागि, यो आफ्नो कपाल बिगार्छ छैन भनेर देख, तर एक सय प्रतिशत रंगे छन्। यो परिस्थितिमा प्राकृतिक तेल आधारित बाल रंगाई लागि सम्पूर्ण नयाँ सुविधा सिर्जना मा कम्पनी «गार्निअर» को विशेषज्ञहरु प्रेरित।
हामी बारेमा रंग «Olia» (गार्निअर) कुरा गर्दै छन्, जो को समीक्षा पहिले नै देखा छन्। यो नयाँ मध्यम को रहस्य के हो? कसरी तेल कपाल रंग गर्न सकिन्छ प्रयोग गर्ने? कसरी लामो गर्छ बाल गर्न यस्तो रंग, र यो तिनीहरूलाई कसरी असर गर्छ? कि म आफ्नो लेखमा बताउन चाहनुहुन्छ के।
एक पारंपरिक रंग जस्तै, अमोनिया बाल कार्य?
निम्नानुसार रंगाई मा अमोनिया काम गर्दछ: एक alkaline वातावरण सिर्जना गर्ने, यो बाल सुरक्षा मात्रा खुल्छ र जसबाट यसको संरचना मा रंग पदार्थ को राम्रो प्रवेश बढवा दिन्छ। हाम्रो कपाल यो हानिकारक प्रभाव। फलस्वरूप, तिनीहरूले नीरस र निर्जीव हुन्छन्। पछि धेरै यस्ता प्रक्रियाहरु गर्न सक्छन् र यसको धनी कपाल केही गुमाउनु।
धेरै निर्माताहरु आफ्नो पेंट्स विभिन्न तेल थप्न। तिनीहरूले मुख्य रूप मायालु र सुरक्षा कार्यहरु। प्रयोगशाला विशेषज्ञहरु «गार्निअर» अझ भयो - तिनीहरूले सिर्जना गर्न निर्णय अमोनिया बिना रंग, जसको भूमिका ठीक तेल प्रदर्शन गर्न हुनेछ। रंगाई एजेन्ट «Olia» (गार्निअर), ग्राहक समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक छन् जो - यस प्रकारको पहिलो क्रीम।
कसरी मा प्यालेट «हे lia» तेल?
बाल डाई गार्निअर «Olia» बिस्तारै र ध्यानपूर्वक कार्य। यसलाई हामी भने छ रूपमा, अमोनिया को भूमिका छ तेल तेल argan रूख, सूर्यमुखी, Camellia र जैतून। तिनीहरूले भित्र पस्नु मदत, केश मा गहिरो रंग छुटकारा। यस मामला मा, तपाईं रंग को मात्र होइन चमक, तर पनि बाल को असाधारण कोमलता र silkiness प्राप्त। यो पनि staining परिणाम9सप्ताह सम्म धारण कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो प्रतिरोधी रंग को कार्य बराबर छ।
डाई गार्निअर «Olia» 25 Shades हुन्छन्। तिनीहरूलाई बीच, 8 रंग - गोरा को रंग। रातो र चमकिलो चेरी रातो: त्यहाँ अति-उज्ज्वल रंग प्रेमीहरूलाई लागि दुई रंग हो। Brunettes र आफूलाई लागि उपकरण रंग को लाइन मा उपयुक्त टोन पाउन।
धेरै महिला पेंट्स उद्योग सफलता बाल गर्न थाले भन्ने विश्वास गर्छन्। र यो सफलता को «Olia» (गार्निअर) सृष्टिको मा बुझे थियो। दुकानदारों को समीक्षा तिनीहरूले यो उपकरण प्रयोग गरेर आफ्नो कपाल डाई ठूलो छ मा सफल भन्छन्। एकै समयमा, तिनीहरूलाई थुप्रै रूपमा, रंगाई पछि बाल उल्लेखनीय नरम र docile, उच्च-प्रदर्शन पोसिलो मास्क प्रयोग पछि छन्। र प्रक्रियाहरु केही कर्ल पछि छैन को reminiscent "फिक्का कडा पराल,", सामान्य रूपमा, शैली र चम्कने राम्रो-छ र। महिला ग्राहकहरु पनि रंग एक सुखद fruity स्वाद, जो रंग प्रक्रिया सहज बनाउँछ छ उल्लेख छ।
यसरी, नयाँ कपाल डाई «Olia» (गार्निअर), समीक्षा जो यस उपकरण को उच्च दक्षता गर्न बाल प्रक्रिया तिनीहरूलाई नष्ट बिना बयान दिन्छौं, साँच्चै सुन्दर रंग। खैरो लिंदा 100% मा हुन्छ। महिला सुरक्षित रूपमा यो नयाँ उत्पादन भरोसा गर्न सक्छौं।
शैम्पू "अश्वशक्ति": समीक्षा र संरचना
"Eccentric अणु 02": ग्राहक समीक्षा, वर्णन, फोटो र मूल्य
काजल "Gurmandiz गैर-स्टप": समीक्षा
बेचैन आत्माको "Dzhimmi up, chu"
Eau डे अरमानी कोड खेल
परेलाहरु र eyebrows को विकास को लागि राम्रो उपकरण
मसीही चर्च को Canon के हो?
पुटिन को वृद्धि के हो? रोचक प्रश्न
रूसी वायु सेना: आफ्नो संरचना र सामान्य विशेषताहरु
Yeisk होटल। लोकप्रिय शहर होटल
फोटो र संगीत बाट स्लाइडहरू कसरी बनाउने?
किन केकडे को सपना? समुद्र वा अन्य घटनाहरू यात्रा गर्न?
Halkidiki, "सनी बीच" - लक्जरी र आराम!
को वोरोनिश छेउको वैविध्यपूर्ण र आकर्षक प्रकृति
सुन्निएको खुट्टा। विकृति कारण
यस बालिका लागि आफ्नो हातमा एक सुट कसरी सी गर्न? बार्बी र अन्य गुडिया
के म भने विन्डोज आवश्यक फाइलहरू स्थापना गर्नुपर्छ सक्दैन